Amamihe Dị na Baịbụl Na-echebe Onye Nwere Ya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bashkir Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ọgaranya nwere ike jiri ego ya gbapụta onwe ya, ma ịbasiri ogbenye mba ike maka iji ego gbara onwe ya enweghị isi.”—ILU 13:8, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
N’EZIOKWU, e nwere uru dị n’inwe ego. Ma, e nwere nsogbu ndị ya na ya na-agakọ, nke ka nke, n’oge ọjọọ a anyị bi na ya. (2 Timoti 3:1-5) N’obodo ụfọdụ, ndị nwere ego na-aghọrọ ndị ohi na ndị na-atọrọ mmadụ anụ oriri.
Otu akwụkwọ akụkọ kwuru ihe na-eme n’otu obodo ka na-emepe emepe. Ọ sịrị: “Iji égbè ezu ohi, igwu wayo na ịtọrọ mmadụ na-eme ka ndị ọgaranya na ndị ogbenye dịrị n’iro. Ị gaa n’ụlọ nri dị iche iche, ị ga-ahụ ndị nche ka ha ji égbè na-eche nche. A na-agba ụlọ ndị nwere ego ogige, ndị nche ana-echekwa ha nche. A na-etinyecha ha ọkụ, kamera, na ihe ndị ga-emerụ onye ọ bụla chọrọ isi n’ogige gafeta ahụ́.” Ụdị ihe a na-emekwa n’ọtụtụ obodo.
Ma, Baịbụl gosiri na ihe a niile agbasaghị ndị ogbenye. Olee uru ihe ahụ Ilu 13:8 kwuru ga-abara gị? Ọ bụrụ na i bi n’ebe ndị omekome juru ma ọ bụkwanụ na ị ga-aga ụdị ebe ahụ, egosila ndị mmadụ na i nwere ego. Chee echiche nke ọma tupu i kpebie ihe ị ga-eyi ma ọ bụkwanụ ihe ị ga-eji apụ apụ, ka ọ ghara ịdọrọ anya ndị mmadụ. Ilu 22:3 kwuru, sị: “Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo, ma ndị na-amaghị ihe nọ na-aga, ha ga-atakwa ahụhụ ga-esi na ya pụta.”
Ụdị amamihe a Baịbụl kwuru ka anyị nwee gosiri na Onye kere anyị hụrụ anyị n’anya. Ọ chọghị ka anyị daba ná nsogbu. Ekliziastis 7:12 kwuru na “amamihe bụ ihe nchebe” n’ihi na ọ “na-echebe ndị nwe ya ndụ.”
Chọpụta ihe Baịbụl n’onwe ya kwuru.
Amamihe Na-akpọ Òkù—Ị̀ Na-anụ Ya
Ọ bụ amamihe si na Baịbụl ga-eme ka nsogbu ụmụ mmadụ bie.